घरवालाले कोठामा नपस्न भनिदिएछन् । अनि शुरु भएको हुन्छ उनीहरूको सडकको बास ।
पैदल यात्रु छैनन् ! सडक चकमन्न छ । एक्का दुई मान्छे सतर्कताका साथ निस्कन्छन् र ओझेल पर्छन् । एकै छिनमा सन्नाटा चिर्दै हर्न निषेधित शहरमा एम्बुलेन्सको आवाज थिचेर एउटा भट्भटे आउँछ । फेरि आउँछ एउटा चिल्लो कार अर्कातिरबाट । चुंरिक्क, भयानक आवाज हुन्छ ! सायद दुवै ठोक्किएका हुन्छन् । हेर्दाहेर्दै गाडीको ताँती लाग्छ । घर बस्नेलाई मात्रै लाग्ने हो कि लकडाउन जस्तो प्रतीत हुन्छ ।
"लौ न भट्भटेवाला भट्याक्भट्याक पो गर्दैछ त !" कसैको आवाजले ज्यान जोखिममा रहेको संकेत गर्छ । परे बसेर हेर्नेहरू धेरै छन् । उठाउन मद्दत गर्न कोही बढेको देखिन्नन् । रोग सर्न सक्छ । कुनै जाली सिनेमाको सुटिङ्ग हुनसक्छ । अनेकौं चाल हुनसक्छ । एकातिर चेपिएको मान्छे चियाएको सुनिन्छ अर्कोतिर बेकामेहरूको कल्याङ्मल्याङ्ग । त्यत्तिकैमा एम्बुलेन्स आउँछ र बिरामी लिएर हुइंकिन्छ । जुन अस्पतालको एम्बुलेन्स हो त्यही अस्पतालले बिरामी राख्न मानेन भनेको सुनिन्छ । "गरिबको उपचार, खतराको ब्यापार" ठान्ने इनले के गर्थे सेवा भन्दै एक जना वयोवृद्ध एकापट्टिको झ्यालबाट सबै कुरा भेउ पाएझैं भन्नुहुन्छ । "हेर न यो बिरामी अस्पताल खोज्दाखोज्दै मर्छ !"
छेवैको रूखमुनि कोही व्यक्ति खानेकुरा माग्दै हुन्छन् । "रोगले भन्दा भोकले लैजाने भयो, हजुर ! केहीकेही दिनुहोस् पुण्य हुन्छ ! उपस्थित कसैका कानमा त्यो आवाज ठोक्किँदैन । पछिल्तिरबाट सबैलाई धकेल्दै एक पुरुष आउँछन् र बिस्कुट थमाउँछन् । उसले छोएर गएको कसैलाई याद हुँदैन । बिस्कुट दिएको एउटा विडियो खिचेर उक्त पुरुष पनि ओझेल पर्छन् ।
करिब बीस दिनपछि एउटा समाचार आउँछ । फलानो ठाउँको रुखमुनि बस्ने मानिस महामारीको कारण मरेको भन्ने । त्यसपछि त्यहाँ भेला भएका मानिसहरू रोग जाँच्न जान्छन् । उनीहरूमा कोरोनाको जीवाणु भएको पुष्टि हुन्छ । अचम्म मान्छन कि उनीहरूले उक्त मृतकलाई छोएका हुन्नन् र दस फिटभन्दा परबाट हेरेका मात्र हुन्छन् । अब रुन्थलीलाई सम्झना भयो कम्मरै बेरम्ला जस्तो गरी जिउ छोएर अगाडि बढेको मान्छेको ! उसैका मद्दतले बिस्कुट बाँडेको विडियो खिचिएको थियो ।
समाचार खोज्न हिंडेका पंक्तिकार पनि अवाक् रहन्छन् । छामछुम गर्दा खल्तीबाट निस्केका गोडा दुवेक हजार उनीहरूलाई थमाउँदै उनी अगाडि बढ्छन् । कतै किसान बाली नस्ट गर्दै भेटिन्छन्, त कतै बैंकअगाडि ब्याज मिनाहाको माग राखी ऋणी धर्ना बस्तै ।
अनि त्यही बिस्कुटसंगै कीटाणु लिएर ती गरिबगुरुवाको ज्यान गएको दर्दनाक घटना थियो । अनाहक अरूलाई दुख पुर्याउने ठेटनाहरूले मासु खाने भए ! रुन्थलीलाई खुइय्य भयो । चटक्क खाइलाग्दा र गाँठवालालाई रोग लाग्दैन कि भन्ने सोच झूठो सावित भएको थियो । अमेरिकामा अस्वेतलाई मात्रै लाग्छ भनिएकामा गोरावर्ग पनि शिकार भएजस्तै ! अहिले सबैजना शुद्धबैठीमा छन् । "अदालतले शुन्य समय भनेको छ, सबैखाले शुल्क मिनाहा होस् अनि उपचार पूर्ण निशुल्क । स्कुल होस् कि अस्पताल अनि ब्यापारी, उल्टोपाल्टो गर्ने सबैलाई ठिङ्गुराउनु पर्छ । सबैलाई खोजी खोजी रासन पुर्याउनुपर्छ दाता खोजेर हुन्छ कि सरकारी खर्च कटाएर ! यस्तै मर्दापर्दा त हो नि नागरिकमा ढाडस बाँड्ने । छेमेकी उस्तै छन् फेरि, सीमा पनि हेर्दै गर्नुपर्छ ! बाँचीबर्ती रहे देशको सीमार्थ हामी सँगै लड़ौला !" सरकारी संयन्त्रलक्षित आन्टीको कुरा माननीय थियो ।
विद्यमान लकडाउनले उब्जाएका धेरै कुराले मानव सभ्यतालाई नयाँ शीराबाट व्याख्या गर्नुपर्ने सुझाएको छ । यहाँ संसार जित्छु भन्नेहरू भुसुभुसु लडिरहेका छन् । ठूलाठूला महलका अगाडि झुपडीहरुमा आगो बल्न छोडेको महिना दिन कटिसक्यो । कसैले ओर्लेर केही सहयोग गरेको देखिन्न । अरू बेलाका भरियाहरू निर्जन पाटीहरूमा मुढा लड़ेसरह लडेका भेटिन्छन् । छोरीको अनलाइन पढाइ नछुटोस् भनी पिलपिले मोबाइल चार्ज गर्न बाटो परी बिजुली भएको साथीको घरमा जानुभएकी आन्टीलाई साइकलवाला कसैले ठक्कर दिएर इन्तुनचिन्तु बनाएको छ । उपचार गर्न अस्पताल जानु अर्को कहर थपिने पीरले उहाँ पालमै सुतिरहनुहुन्छ खुट्टामिच्दै ।
शुरुमा जस्तो समाजसेवी भन्नेहरू पनि चुपचाप बस्न थालेका छन् । अविभावकको ढाड भाँचिने गरी दोहोरो र तेहेरो शुल्क लिएर टाइ सुट र भात बेच्नेहरूले स्कुले भान्से बिर्से । अनि शिक्षक बिर्से । अरू बेलै पनि सित्तै दिनुपरेजस्तो गर्नेले महामारी पर्दा त झन् तलब दिने कुरै आएन क्यार । परेको बेला एक दुइ महिना पनि तलब धान्न नसक्ने संस्थाका नाममा बढेमानका बिल्डिंग किन बनाइन्छन् ! सडकमा डुल्दै गरेका माइला मास्टरले पंक्तिकारतर्फ हात बढाउँछन् । नभन्दै काम गरिआएको स्कुलले तलब नदिएकाले उनी खुराक जोहो गर्न निस्केका रहेछन् ! भोकै बस्न पनि नसकिने राहत लिन पनि अप्ठ्यारो हुने !
"चोर्नु भएन, बरू माँग्न ठिक होला ।" भन्दै उनी कुर्लिए, "समाज सेवा भनेका छन् लुटेका छन् ! पोहोर साल पचास लाख आम्दानी भयो भन्दै थिए, यसपाली डेढ़ करोढ । चैतकै लिन बाँकी थियो, लक डाउन शुरु भैगो ! यत्तिका दिन बिते अब त के देलान् समाजसेवीहरूले । समाजसेवा भए त्यत्रो कमाए पछि त शुल्क कम पो गर्दै लानु पर्ने । कारिन्दाको सुविधा बढाउनु पर्ने ! सधैं आफू हिडिरहनुपर्ने आधी समय आफ्नै गाडी कुदाइरहनुपर्ने अगाडिको हिलाम्य सडक निर्माण पहल गर्नुपर्ने । माथ्ला पट्टिको पानी ल्याउने गरेको सार्वजनिक ढुङ्गेधारोमा ढुंगा छापे पनि हुन्थ्यो ।
बिपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष सुविधामा राख्नुपर्ने । सामान्य खर्च धान्ने जति शुल्क उठाएर बचतले सम्बन्धितलाई राहत दिनु पर्ने । सब ठगहरू ! पैसा खुवाएर समाचार लेखाएर समाजसेवी भएकाहरूले सेवा गर्ने समाज चैं त्यै टन्न हसुर्न पाउनेहरू त होलान् नि ! फेरि यो सामाजिक सुरक्षाकोषको अर्कै पीडा छ, भाइ । तपाईंहरू पो संचयकोषवाला पर्नुभयो । हामीलाई त सास्ती छ । पोहोर तलब बढ्ने बेलामा यसको कुरा आयो । भैरहेको स्केल काटेर यति र उति प्रतिशत मिलाउने भन्दै तलब बढाउनु त परे जाओस् भैरहेको महिनावारी पनि काट्दै राखे, यतिखेर त्यही दिए पनि हुने नि ! के दिन्थे, अझ सुन्दैछु सामुदायिक स्कुल पनि इनीहरूकै जिम्मालाउने पो कुरा छ रे ! स्कुले फेरि पैसै उठाउन नपुगेझैं खुल्न तयार छन्, यता स्वास्थ्यको जिम्मा तिनले लिन्छन् त ! खबरदारी गरिदिनुहोस है ! यस्तो पाराले हुँदैन । जनन्याय खोई !" थोरै रकम सहायोग लिएपछि गहभरी आँशुमा धन्यवाद भन्दै उनी घरतर्फ लागे ।
अलि पर्तिर हातमा ज्यावल र सुत्री बोकेका तीन व्यक्ति भेटिन्छन् । उनीहरूका ठेक्केदारले लकडाउन खुलेपछि मात्रै आउनु भनी पठाइदिएछन् । भाडाको बसाई, पहिलो हप्तासम्म त ठिकै चल्दै थियो । त्यसपछि घरवालाले कोठामा नपस्न भनिदिएछन् । अनि शुरु भएको हुन्छ उनीहरूको सडकको बास । एक छेउ लागेर हिंड्छन्, कसैले केही काम लाए गुजारा हुन्छ नभए दुनियाँ हेरेर चित्त बुझाउँछन् ।
एक जना युवकलाई सोधिन्छ, "काम त पाइन्छ ?"
जवाफ अचम्मको थियो: अरू रोगका बिरामी अस्पतालतिर नदेखिएजस्तै हामीलाई पनि काम लाउने मान्छेहरू एकाएक गायब छन् । के पाइन्थ्यो काम । एक महिनामा एउटा सानो पर्खाल सन्ध्याको, अनि हिंजो एक जनाको छत टाल्न पाइएको थियो । नत्र त सुख्खा ! गारो छ, हजुर । तपाईंहरू जस्तो साहु त झन् आउने अनि यो र त्यो सोधेर झर्को दिने । हामीलाई त भोक लागेको छ पैसा दिनोस् खानेकुरा दिनोस् । हो त भन्या !
बिजुली अफिस पानी अफिस मालपोत अड्डा सबैतिर जुलुस छ ! सबैभन्दा ठूलो कुरो त झन् गोदावरीको पाखा ओडारमा मिल्छ । क्वारेन्टाइनबाट भागे भनिएका सुरुङ्गप्रसाद तीन जनाको परिवारसहित त्यहाँ बस्न पुगेका रहेछन् । "ठूला नेता जति कोही भारतीय दुताबास, कोही चैनाको नियोग, कोही एमसीसी के के हो गफ गर्दै हिंड्दा रान् । अनि त्यहाँ जबर्जस्ती राखेर पहिलेका दाइ दिदी पनि कता हिंडे, आफ्नो बिचल्ली हुने देखेर म त भागें । झुप्रोमा बसुम्, समाएर लैजालान् भनेर इ हामी त च्युरा मकै टन्न लिएर यता पो बस्न थाल्यौं ।" सबैकुरा चाँडै सामान्य होस्, र ब्यबस्थापन मिल्दै जाओस् सोच्तै पंक्तिकार घरतिर लाग्छन् ।
प्रकाशित १९ जेठ २0७७ , सोमवार | 2020-06-01 08:18:59